२०४ म्यानपावर कम्पनी कारवाहीमा परे, कुन-कुन परे ? (नामसहित)	Postpati – News For All
२०४ म्यानपावर कम्पनी कारवाहीमा परे, कुन-कुन परे ? (नामसहित)
पोष्टपाटी August 2, 2019 प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
साउन १७, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले २ सय ४ म्यानपावर कम्पनीको सम्पूर्ण काम-कारवाही रोक्का गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकलाई पिडित बनाएको र वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकेको कारण म्यानपावर कम्पनीहरुको कामकारवाही रोक्का भएको हो ।
यसरी कारवाहीमा परेर कामकारवाही रोक्का भएका म्यानपावरहरुले रोक्का फुकुवा नगरेसम्म कुनै पनि युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउदैन । विभागले विदेश जानेहरुलाई पिडित बनाउने मात्र नभई म्यानपावरमा काम गर्ने कर्मचारी विवरण नबुझाउने र पुराना मुद्दा फरफारक नगर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई समेत कारवाही गर्दै रोक्का गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षदेखि पीडितको उजुरीलाई आधार मानेर समेत विभागले म्यानपावरको काम कारवाही रोक्का गर्ने गरेको हो । बैदेशिक रोजगारीमा पीडितले विभागमा उजुरी दिएको आधारमा बिभागले म्यानपावरको कारवाही रोक्का गरेर समस्या समाधानको लागि बिभाग बोलाउने गरेको छ । म्यानपावरले पिडितको समस्या समाधान नगरे त्यस्ता म्यानपावरलाई निष्क्रिय सूचीमा राख्ने गरेको छ ।
बैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावरका विरुद्ध चर्को अशुली, ठगी, विदेशमा अलपत्र पारेको, एउटा काम भनेर अर्को काम लगाउने गरेको, नक्कली डिमाण्ड बनाएर झुक्याउने गरेको, म्यानपावरले एजेन्टमार्फत ठगि गरेको, सामस्यामा परेका कामदारको उद्धार गर्न चासो नदिएको र म्यानपावरका शाखा कार्यालयबाट ठगी गरेको भन्दै पीडितहरुले विभागमा उजुरी दिने गरेका छन् ।
गत असार महिनामा मात्रै १४२ उजुरी परेका थिए । असारमा परेका उजुरीमा ९५ वटा म्यानपावरहरुको नाम मुछिएका थिए । बैदेशिक रोजगार बिभागको अनुसार गत आर्थिक वर्षभरीमा म्यानपावर कम्पनी बिरुद्ध मात्र १२६३ उजुरी परेको थियो भने व्यक्तिगत तर्फ बर्षभरीमा ७७६ उजुरी परेका थिए ।
बैदेशिक रोजगार बिभागको अनुसार गत आर्थिक वर्षभरीमा म्यानपावर कम्पनी बिरुद्ध मात्र कुल रु. २९ करोड ६३ लाख २० हजार ४३४ मागदावी गरिएको थियो भने व्यक्तिगततर्फ ५३ करोड ६७ लाख २८ हजार ६८४ रुपयाँ मागदावी भएको थियो ।
कारवाही प्रक्रियामा परेका म्यानपावरहरुको सुची हेर्नुहोस ।